‘Iqembu elifana nePirates akumele lidliwe ngendlela okwenzeke ngayo kwi-Arrows,' kusho uJele wePirates - Impempe
‘Iqembu elifana nePirates akumele lidliwe ngendlela okwenzeke ngayo kwi-Arrows,’ kusho uJele wePirates
UHappy Jele we-Orlando Pirates, uthi kuyihlazo okwenzeka eqenjini njengamanje
Ukaputeni we-Orlando Pirates, uHappy Jele uthi yibona njengabadlali, hhayi umqeqeshi okumele basolwe ngokubhacaza kweqembu njengoba seliphenduke inhlekisa muva nje.
Ukhale kakhulu ngendlela eyihlazo abahlulwe ngayo yiLamontville Golden Arrows kuleli viki, wathi akufanele iqembu elikhulu kangaka lidlale Abafana Bes’thende ngaleya ndlela.
“Kuyo yonke imidlalo sifuna ukudlala njengeqembu, kodwa kwesinye isikhathi siyahlulwa ngoba ngenxa yokunganaki nokwenza amaphutha abucayi. Okufuneka sikwenze ukufaka umfutho othe xaxa njalo nje. Kumele sizame ukuwina kuyo yonke imidlalo ngoba inqembu elikhulu njengePirates alikwazi ukuhlulwa ngendlela okwenzeke ngayo ngoLwesibili,” kusho uJele.
Uvikele nomqeqeshi, uJosef Zinnbauer, ethi kwesinye isikhathi kumele nabadlali bazinuke bona amakhwapha uma izinto zingahambi kahle. Ngemuva kokuhlulwa yi-Arrows, abalandeli beBucs bakhwele badilika kuZinnbauer bethi sekumele ashenxe ngoba sekucacile ukuthi ngeke esalisiza ngalutho iqembu.
“Umqeqeshi nomqeqeshi ufika nendlela yakhe akholelwa kuyo yokudlala, thina kumele siyifunde, siyenze enkundleni. Umqeqeshi usenza kahle, siwine indebe ngaye. Ngeke sikuphike lokho.
“Kodwa izinto azihambi kahle kwiPremiership. Sidlala kahle, futhi siyazimisela kodwa kunamaphushana okumele siwalungise. Umqeqeshi uyasisiza ukuwalungisa nokusigqugquzela ukuthi singalilahli ithemba siqhubeke silwe,” kuchaza uJele.
UJele usehlale amasizini angu-15 kwiPirates kanti uthi kusekuningi akufisayo futhi uyakuvuma ukuthi kukhona la okusamele enyuse khona izinga ukuze asize iqembu.
“Kuwumuzwa omnandi ukudlalela i-Orlando Pirates isikhathi eside kangaka,” kusho yena. “Kodwa angiyiqalanga kahle le sizini, futhi kudingeke ngizikhandle ukuze ngibuyele eqenjini eliqala imidlalo.
“Okungenani manje sengiyadlala kodwa kusekuningi okumele ngikulungise. Okwamanje kuhamba kahle kodwa kumele ngiqhubeke ngokuzikhandla ukuze ngisize iqembu,” kubeka uJele owaqala ukudlala kwiPirates ngesizini ka-2006/07, esuka kwiWalter Stars kaWalter Mokoena wodumo kwithelevishini.
IBucs inomdlalo obucayi weNedbank Cup njengoba izobhekana neqembu elingakhathalele lutho, Uthongathi FC e-Orlando Stadium ngoMgqibelo ntambama. ICane Cutters, edlala kwiGladAfrica Championship, ayibhekiwe futhi akulindelwe ukuthi ingawina iKe Yona, kodwa izofuna ukuzibonakalisa ubukhali bayo ngokugingqa lezi zinkunzi zePremiership
“Kumele sisebenze ngokubambisana, senze kangcono. Indlela esidlale ngayo kwiMTN8, ngicabanga ukuthi sidinga ukubuyela kuyo…siyawudinga lowa moya wokulwa esasinawo. Sidinga umphumela omuhle kulo mdlalo ozayo, bese sibona ukusuka lapho ukuthi sibhekaphi,” kusho uJele.
Previous Previous post: Uthandazela ukuthi bangabe besawulahla umgqiggo uMacuphu weTS Galaxy
Next Next post: UZuma ubona kuzoba nzima kwiChiefs ukudlala neRichards Bay